सोमबार नेप्से परिसूचक १२ अंक बढ्यो - Naya Patrika
सोमबार नेप्से परिसूचक १२ अंक बढ्यो
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २५ पुस | पुष २५, २०७४
सोमबार नेप्से परिसूचक १ हजार ४ सय ४३ दशमलव ८० अंकमा पुगेको छ । आइतबार ७ दशमलव ९७ अंक बढेको नेप्से सोमबार १२ अंकले बढेर सो बिन्दुमा पुगेको हो ।
कारोबार सुरु भएको पहिलो घन्टा नेप्से १ हजार ४ सय ४८ बिन्दुसम्म पुगेको थियो । तर, त्यसपछि अर्को ओरालो लागेको नेप्से करिब १ बजे १ हजार ४ सय ३६ बिन्दुमा आइपुगेको थियो । यसरी कारोबार बन्द हुने समयमा नेप्से परिसूचक पुनः केही बढेर सो अंकमा पुगेर अड्किएको हो । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम १० करोड बढेर ४६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने बजार पुँजीकरण १४ अर्ब बढेर १६ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
सोमबार सबैभन्दा बढी मल्टिपर्पोज फाइनान्स कम्पनीको सेयर मूल्य ९ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत बढेर ३ सय ७३ रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यस्तै एनआइबिएल प्रगति फन्डको सेयर मूल्य भने सबैभन्दा धेरै ५ दशमलव ५ प्रतिशत घटेको छ । कारोबारमा आएका १० समूहमध्ये होटेल समूहको परिसूचक मात्र नकारात्मक हुन पुगेको हो । होटेल समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ८२ प्रतिशत घटेको छ । यसबाहेक बिमा समूहको परिसूचक १ दशमलव ६४ प्रतिशत, व्यापारको शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत, वित्त कम्पनीको शून्य दशमलव ५१ प्रतिशत, विकास बैंकको शून्य दशमलव ४१ प्रतिशत, जलविद्युतकाे शून्य दशमलव १७ प्रतिशत र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको शून्य दशमलव ११ प्रतिशत बढेको हो ।
सिन्धुको अवितरित हकप्रद लिलाम बिक्री
सिन्धु विकास बैंक लिमिटेडले संस्थापक समूहको ५ लाख ३८ हजार ३ सय २ दशमलव ४० कित्ता अवितरित हकप्रद सेयर सिलबन्दी बोलपत्रमार्फत बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले भदौ १८ गतेदेखि कात्तिक ५ गतेसम्म निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको हकप्रद सेयरमा आवेदन नपरेको सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । सो सेयर खरिदका लागि माघ २ गतेदेखि १० गतेसम्ममा सिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । कम्पनीको सेयर बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेको छ । सो सेयरका लागि एनआइबिएल क्यापिटल, लाजिम्पाट, लगनखेल र चिप्लेढुंगा, नेपाल इन्भेष्टेमन्ट बैंकका वीरगन्ज, नेपालगन्ज, सुर्खेत, विराटनगर, नारायणगढ, बुटवल र धनगढी शाखा कार्यालयबाट सिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्न सकिनेछ ।
श्री इन्भेष्टमेन्टको बुक क्लोज
श्री इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले पुस ३० गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ । कम्पनीले १० बराबर ८ दशमलव ३ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन प्रयोजनका लागि सो दिन बुक क्लोज गर्न लागेको हो ।
लुम्बिनीको १०ः१ हकप्रद
लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले माघ ११ गतेदेखि १० बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । बैंकले प्रतिकित्ता रू. १ सय अंकित मूल्यका २० लाख ८ हजार ८ सय ७८ दशमलव ४७ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । हकप्रद निष्कासन बन्द हुने मिति फागुन १६ गते रहेको छ । बैंकको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । सेयरधनीहरूले प्रभु क्यापिटल, लुम्बिनी विकास बैंकका सम्पूर्ण शाखा कार्यालय, भिबोर क्यापिटल लिमिटेड र आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । हकप्रद निष्कासन तथा बाँडफाँडपश्चात् बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब २० करोड ९७ लाख ६६ हजार ३ सय १५ रुपैयाँ पुग्नेछ ।
सेन्ट्रलको २ः१ हकप्रद निष्कासन खुला
सेन्ट्रल फाइनान्स लिमिटेडले पुस २३ गतेदेखि २ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता रू. १ सय अंकित मूल्यका २६ लाख ३ हजार ३ सय १४ दशमलव शून्य ७५ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । हकप्रद निष्कासन बन्द हुने मिति माघ २८ गते रहेको छ । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेको छ । सेयरधनीहरूले एनआइबिएल क्यापिटल मार्केट्स, सेन्ट्रल फाइनान्सका सम्पूर्ण शाखा कार्यालय, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका विराटनगर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, इटहरी र धनगढी शाखा कार्यालय र आस्बा सदस्य कम्पनी तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५२ करोड ६ लाख ६२ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ रहेको छ भने हकप्रद निष्कासन तथा बाँडफाँडपश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७८ करोड ९ लाख ९४ हजार २ सय २२ दशमलव ५० पुग्नेछ ।
कर्णालीको १ः२.२५ हकप्रद
कर्णाली विकास बैंक लिमिटेडले माघ ११ गतेदेखि १ बराबर २ दशमलव २५ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । बैंकले प्रतिकित्ता रू. १ सय अंकित मूल्यका ३३ लाख ९७ हजार ५ सय कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । हकप्रद निष्कासन बन्द हुने मिति फागुन १६ गते रहेको छ ।
बैंकको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । सेयरधनीहरूले प्रभु क्यापिटल, कर्णाली विकास बैंकका शाखा कार्यालय, प्रभु बैंकका विराटनगर, वीरगन्ज, पोखरा, बुटवल र धनगढी शाखा कार्यालय र आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी १५ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ भने हकप्रद निष्कासन तथा बाँडफाँडपश्चात् बैंकको चुक्ता पुँजी ४९ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।